သင့်​အတွက်အံ့အားသင့်ဖွယ် သတင်းကောင်းတစ်ခု ရှိနေပါတယ်​!
အရောင်းအဝယ်သမားများ ၁၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျော်
ယနေ့ကစပြီး ငွေထည့်သွင်းမှုလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်! MyanPayဖြင့် ငွေထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ငွေထည့်သွင်းရင်းနှီးပြီး FBSနှင့်အတူ အမြတ်ငွေ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ!
FBSတွင် ကုန်သည်တိုင်းအတွက် မိမိတို့ နည်းဗျူဟာအလိုက် နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့အတွက် အကောင့်အမျိုးအစား ၆မျိုးကို စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ အနည်းဆုံးရင်းနှီးငွေ ၁$ဖြင့်စတင်နိုင်မည့် ဆင့်အကောင့်မှ အစပြုပြီး - spreadအနည်းဆုံးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်မည့် အကောင့်အမျိုးအစားသစ် ECNအကောင့်အထိ အမျိုးအစား စုံလင်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ FBS၏ အကောင့်အမျိုးအစားအားလုံးကို သေချာစွာ စုံစမ်းကြည့်ရှူလိုက်ပါ။ ပုံသေ spreadအကောင့်၊ spreadမယူသောအကောင့်တို့ရှိပြီး အဆုံးမဲ့တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေလဲ များစွာစီစဉ်ပေးထားပါသည်။!
FBSသည် ဖောက်သည်များကို တကယ့်ကိုဂရုစိုက်သည့် အကျိုးတော်ဆောင်ကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခု အဖြစ် နာမည်ကျော် လူသိများပါသည်။ ထိုကဲ့သိုအသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အတွက် လွန်စွာမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပြီး ထိုနာမည်ကောင်းကို ရေရှည်ဆက်လက်တည်တံ့နိုင်စေရန်အတွက် အမြတ်ရရှိပြီး၊ အဆင်ပြေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေမည့် အရောင်းအ၀ယ် စည်းကမ်းချက်များကို အစွမ်းကုန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစါပါသည်။.
ယနေ့ပဲ MyanPayနှင့်ငွေထည့်သွင်းပြီး သင့်ရဲ့နောင်လာမယ့် မနက်ဖြန်တွေမှာ အောင်မြင်တိုးတက်လာအောင် FBSနှင့်အတူတကွ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.
FBSမှ သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ် တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ
FBSမှ ၎င်း၏ သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ် - သင့်အရောင်းအဝယ်ကို ပိုပြီးထိရောက်စေမည့် နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုကို ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါပြီ!
ဈေးကွက် အားလပ်ရက် အချိန်နာရီများ
လာမည့် ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက် ရာသီကြောင့် အရောင်းအဝယ် အချိန်နာရီများ အပြောင်းအလဲရှိလိမ့်မည်ကို သတိပြုပါ။
"စိတ်ကူးအိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာပြီ" ပြိုင်ပွဲကံထူးရှင်အတွက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ဆုလက်ဆောင်
ဘရာဇီးမှ Leonardo နှင့် Aldilene တို့သည် သူတို့၏ နှစ်၃၀ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး၊ ခုလိုနေ့ထူးနေ့မြတ်မှာ Fortaleza ကမ်းခြေကိုလည်ပတ်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။